Izindaba - I-GlassTec - Izinselelo Ezintsha
IGlasstec VIRTUAL kusuka mhla zingama-20 kuya zingama-22 ku-Okthoba ilivale ngempumelelo igebe phakathi kwamanje ne-glasstec ezayo ngoJuni 2021. Ngomqondo wayo oqukethe ukudluliswa kolwazi lwedijithali, amathuba okwethulwa kwenoveli kwababonisi kanye nezinketho ezingeziwe zokuxhumana, iqinisekise ukuthi umkhakha wengilazi wamazwe omhlaba .
“Ngephothifoliyo ebonakalayo ye-glasstec uMesse Düsseldorf ukhombisa ukuthi ingaphumelela ekuhlanganiseni izimboni emhlabeni wonke, hhayi emicimbini yomzimba kuphela kodwa nangamafomethi edijithali. Lokhu kusho ukuthi iyaqhubeka nokuzibeka esikhundleni sendawo engu-1 yokuxhumana nabamabhizinisi bezokuxhumana emhlabeni jikelele, ”kusho u-Erhard Wienkamp, ​​oyi-COO Messe Düsseldorf.
“Ubhadane lomhlaba wonke luyinselelo enkulu embonini yezingilazi kanjalo nakubakhiqizi bemishini nezitshalo kulo mkhakha. Ngakho-ke, bekubaluleke kakhulu ukuthi uMesse Düsseldorf asinikeze ifomethi entsha ye- “glasstec VIRTUAL” ukuze sikwazi ukwethula imikhiqizo yethu emisha nakulezi zikhathi. Ihlukile kwi-glasstec ejwayelekile, kepha isignali ebalulekile futhi ecacile embonini. Sijabule ukusebenzisa uhlelo olubanzi lwengqungquthela kanye nethuba lokukhombisa okwenzekayo okusha kanye nokugqamile ngezikhathi zewebhu neziteshi zethu, futhi sathola nempendulo enhle. Yize kunjalo, sibheke phambili ukuhlangana futhi mathupha e-glasstec eDusseldorf ngoJuni 2021 ”, kusho u-Egbert Wenninger, iSekela Likamongameli Ophakeme we-Business Unit Glass, uGrenzebach Maschinenbau GmbH kanye noSihlalo webhodi labeluleki be-glasstec.
“Ngesikhathi sobhadane, lesi sixazululo sisivumele ukuthi sinikeze imboni ipulatifomu eyengeziwe yokuqinisa nokwandisa ukuxhumana kwamazwe. Manje sekugxilwe kakhulu ekulungiseleleni i-glasstec, ezobanjelwa lapha eDüsseldorf kusukela ngomhlaka 15 kuya ku-18 Juni 2021, ”kuphawula uBirgit Horn, oyi-Project Director glasstec.
Ngaphezu kokuvela kwamakhasi ayi-120,000 kugcizelela intshisekelo ethandekayo ethathwe umphakathi wengilazi kokuqukethwe kwe-glasstec VIRTUAL. E-Exhibitor Showroom, ababonisi abangama-800 abavela emazweni angama-44 bethule imikhiqizo yabo, izixazululo kanye nezicelo zabo. Bangaphezu kuka-5 000 abantu ababambe iqhaza kumafomethi asebenzisanayo. Zonke izikhathi zewebhu namathrekhi engqungquthela maduze azotholakala ngokufunwa. Amagumbi okubonisa ababonisi abazobamba iqhaza azophinde atholakale kubavakashi kuze kube yi-glasstec ngoJuni 2021.